कुन बर्गको पीडितका लागि बोलौं
नारीवादी आन्दोलन र महिला हकअधिकारका भाषण सुनेर पाट्टिएका मेरा कान अब त कानेगुजीले डम्म भरिएका छन् । शोषित,दमित अनेकन जाति,लिंग,वर्गका मुक्तिका नारा त सफल भय । शोषिएका तल्लो वर्गका उमेदवारहरु मन्त्री पनि भय सभासद भय साईकलमा हिड्ने औकात नभएका प्राडो चढ्ने भए । अब यिनका लागि बोल्दिनु प¥यो र ?
महिलाहिंसा बन्द गरका नाराले उपल्लो तहमा पुगेकालाई नछुने रहेछ । आज उनै उपल्लो तहका महिला हिंसामा परेका छन् । गाली गर्ने निच शब्द जति उनिमाथि पोखिएका छन् भने बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाइने, दाइजोको निहुमा जलाइने, बलात्कार गरि मारिनेहरुका लागि आवाज उठाउने ठाउँ कतै देखिन । अनि कसरी तिम्रो बलात्कारी र हत्याराको खोजी गर्न सक्छु र ? निर्मला !
कानुनका किताबमा लेखेर धुलौटो बनेका कानुनले तिम्रो हत्यारालाई कसरी पत्ता लगाउला र सजाय देला निर्मला ? तिमी त एउटी प्रतिनिधि पात्र बनेकी छौ, तिमी जस्ता सयौं निर्मलाले न्याय पाउने आशा मरिसक्यो । आन्दोलनमा हरेक पल्ट उठाइएका ती नाराका लागि एउटी सावित्रीले मात्रै लड्ने हिम्मत देखाएकी छन् तर उनिमाथि प्रष्ट बोलेवापत अनेकन हिंस्रक शब्द र ब्यावहार झेल्न बाध्य छन् ।
जब आन्दोलन हुन्छ तब नाराजुलुसमा निस्केका पुरुषहरु पनि महिलावादी बनिदिन्छन् अनि सत्ताको खेल शुरु हुन्छ ती आन्दोनमा अगुवाई गरेका महिला पनि पुच्छरमा पुग्छन् ।कोहि आफ्नो क्षमता र कोहि निगाहको भरमा नेतृत्वमा पुगिहाले भने उनिहरुबाट भएका कमिकमजोरीहरु कोट्याई कोट्याई समाजमा पाच्य नै नहेने अपचलनका शब्दबाण प्रहार हुन्छ । उनिहरुका हरेक कृयाकलापसँग चरित्रको बाडफाँड हुन्छ र लान्छना लगाईन्छ तिनै महिलावादी पुरुषहरुबाट । बिडम्वना यहाँ पुरुष मात्रै महिला बिरोधी हैनन् महिला नै पुरुषवादी ब्यावहार देखाउन थाल्छन् अनि कसरी तिम्रा लागि आवाज उठ्छन् त निर्मला ?
आज आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि एक महिला अर्की महिलालाई चरित्रहिन बनाउन उद्धत छिन उनका खुट्टा तान्न अग्रसर छिन । यस्तो परिस्थितिमा सम्झना, गुलाब र निर्मलालाई कसले सम्झने ? तिमीहरु त अब कसैले नलुछ्ने ठाउँमा पुगेउ तर तिमी जस्तै ती कलिला मुनाहरु दोषि नजरबाट उम्कने कसरी ? आजकल त नेतृत्वमा पुगेका मात्र हैन स्वयं राष्ट्रपतिका लागि पनि हिंसा भयो भनेर गुहार्नेको कमि छैन अब राष्ट्रपति जस्ता अभिभावकका लागि त दलिय कार्यकर्ताले न्याय खोजिदिनुपर्छ भने निर्मलाहरुका लागि बोल्नेले त छातीमा गोली थाप्ने न हो । यी नाबालिकाहरुलाई बलात्कार गर्ने मार्नेलाई संरक्षण र न्याय माग्नेलाई गोली नदिए त लोकतन्त्रमा महिला हिंसा कसरी रोकिएला ?
महिला राष्ट्रपति हुंदा त कमसेकम बलात्कार, हत्या,हिंसाबाट महिलाले पार पाउने छन् भनेर साढे तीन ईन्च लामो नाक बनाएर त्यै नाकका पोरा फुलाउंदै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री महिला बनिन् ।कानूनमा लेखिएको त थियो होला तर कार्यान्वयन गर्ने बेला नेपोटिज्म त लागू हुन्छ नै । त्यसैले त यहाँ सबै नेता छन् सबै कार्यकर्ता छन् । निर्मला, गुलाब तिमीहरु र हाम्रो औकात एउटै छ ।त्यसैले त तिमीहरु यहाँ बाँच्न सकेनौ हामीहरुले तिमीहरुको लागि न्याय माग्न सकेनौं ।
तिमी न्याय मागिदेउ भन्दै छौ तर हामी यति नालायक भैसक्यौं कि दलिय राजनितिले पिसेर चटनी बनाईसक्यो हामीलाइ । हामी त अब कुन महिला नेतृ कहाँ कसलाई के भन्छिन् ?कुन नेतृले कसको गालामा म्वाई खान्छिन् ? कुन नेतृले कसको हात समाउँछिन् ? कुन नेतृले कति हजारका ब्याग भिर्छिन् ? कुन नेतृले आफ्नो ब्याग बोक्न खेतालो राख्छिन्?कुन नेतृले कुन दलमा जान्छिन् आउंछिन यस्तै सम्बृद्धिका काममा ब्यस्त छौं । सबै जानकारी लिए पछि बजारमा सकेसम्म उनिहरुको चरित्रको धज्जी उडाउन पाईयोस् । यस्ता कामका लागि आजकल महिला कार्यकर्ता धेरै बिज्ञ भैसकेका छौं र पुरुष कार्यकर्ताहरुलाई त मसला नै पुगेको छ । त्यसैले यस्ता महत्वपुर्ण काम छाडेर तिम्रा लागि न्याय माग्न जान फुर्सद पनि छैन नि ।
निर्मला, गुलाब अब म लगायत मेरो युगलाइ नै माफ गर ।समाजका लागि त म माफि देउ भन्नै सक्दिन किनकी तिमी जस्ता सयौं निर्मला गुलाब जन्मने छन् र न्यायका लागि लड्नेहरुका छातीमा गोली बर्सने छन् । हामी अब जिउँदा मुर्दा हौं । हामी मानव समाजमा हैन कि चिहानघाटमा सास बसेका लम्पट हौं ।
फेरि म तिम्रा लागि न्याय माग्न किन जाउँ ? न त तिमीले मेरो पार्टीको नेतालाई भोट दिन्छेउ न त आन्दोलनमा लेघ्रो च्यातिने गरि चिच्याउन सक्छेउ न त तिमीले राष्ट्रपति माथि शाब्दिक हिंसा भयो भनेर आवाज बुलन्द गर्न सक्छेउ ! एक छिन त तिमीले डलरको खेती गरायौ अब त त्यो पनि तिमीबाट हुनेवाला छैन । मानवअधिकार तिमीले पाउने अधिकारभित्र पनि पर्दैन त्यसैले अब तिमीहरु निदाएकै बेस । पिडितहरु तिम्रा लागि उठाईएका आवाज गन्तब्यहिन हुन थाले । अब त न्याय खोज्ने भनेको उच्च पदस्थका लागि हो तिमी हाम्रा लागि होईन यहाँ त महिला पनि पुरुष बनिसके । अब बलात्कारीलाई फाँसी दे,महिला हिंसा बन्द गर भनेको सुन्दा पनि आफैलाई लाज लाग्न थाल्यो । मलाई माफ गर निर्मला, गुलाब अब मैले न्याय दलका शक्तिशाली महिलाको लागि मात्र माग्नुपर्छ । मलाइ माफ गर महिलाको अनुहारमा पुरुषवादी ब्यावहार देखाउनुपर्छ तब यो समाजमा मेरो साख बढ्नेछ ।